दुई दिदीबहिनीले किन लिए अचानक यस्तो निर्णय ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/दुई दिदीबहिनीले किन लिए अचानक यस्तो निर्णय ?
सुर्खेतमा जंगलमा घाँस का’ट्न गएका दिदीबहिनी झु ‘न्डि’एको अवस्थामा मृत फेला परेका छन् । पञ्चपुरी नगरपालिका–६ बाबियाचौरमा बस्दै आएका दुईजना दिदीबहिनी यस्तो अवस्थामा मृत भेटिएका हुन् । १४ र १५ वर्षीया किशोरी दिदीबहिनी यस्तो अवस्थामा शुक्रबार मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी तथा डिएसपी रामप्रसादले बताए ।
उनकाका अनुसार उनीहरू शुक्रबार बिहान ८ बजे घरबाट घाँस का’ट्न नजिकैको जंगलमा गएका थिए । सोही ठाउँमा ११ बजे यस्तो अवस्थामा स्थानीयले देखेका थिए । प्रहरीले नाम नखुलाए पनि १४ वर्षीया किशोरी कक्षा ७ मा र १५ वर्षीया किशोरी कक्षा ८ मा पढ्दै आएको पनि घर्तीले बताए । ‘दुवैजना कमला बादीकी दिदीका छोरीहरू हुन् । कमला बादीकै घरमा बसेर अध्ययन गर्दै आएका थिए ।
’ उनले भने, ‘स्थानीयले दुईजना बालिकालाई यो अवस्थामा भेट्टाएपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।’ शवलाई पोस्टमार्टमका लागि अहिले प्रदेश अस्पताल कालागाउँमा ल्याइएको छ । घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । बाँकि स्थलगत रिपोर्टको भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
सेवा गर्दा गर्दै आफूपनि कोरोना संक्रमित भएछु भन्दै नर्सले गरिन मनछुने कुरा! – हेर्नुहोस् भिडियो
नेपाली पत्रकारलाई अन्तरवार्ता नदिने केपी ओलीले भारतीय पत्रकारलाई बोलाई बोलाई अन्तरवाता दिए र आँफै नां,गीए : रवि लामिछाने